Iingcebiso kunye neengcebiso malunga nokunyangwa kwamafowuni kunye neengqolowa
Izindlela zokulwa namafowuni kunye neengqolowa, amafutha kunye namayeza omntu.
Iingqolowa ezingenamnandi okanye iinkozo zinzima kakhulu kumsebenzi wemihla ngemihla, ukunciphisa ukunyakaza. Iintlungu ezibuhlungu, ezihamba kunye neentsimbi ezibukhali, ukuba sihamba kwindawo ewonakalisiweyo yesikhumba, ishushu. Ngokungathandabuzekiyo, njengezinye izilonda zesikhumba, iifowusi ezomileyo ezinyaweni kunye nakwie paws kufuneka ziphathwe ngamafutha athile afanelekileyo kunye nezinye iindlela, kungenjalo kubangelwa iingxaki, ukufikelela kwangenelelo lokungenelela.
Ukuthetha ngokumelene neefowuni ezomileyo kunye neengqolowa
Njengomthetho, esithende nakusesikhumba kufuphi neminwe, inyawo lidla ngokuchaphazelekayo, kwaye ihlala ithintela inzwane enkulu, yenze into ebizwa ngokuba yi-corn kunye nesitshixo, ukuba into yangaphandle okanye intsholongwane iya kwilonda.
Nantsi ingqolowa kunye nesiqu esithombeni
Kubalulekile ukwazi ukuba izilonda ezinjalo zesikhumba ziqhelekileyo, oku kuthetha ukuba kukho uluhlu olubanzi lweentlobo zeoli, ama-creams kunye nezinye iimveliso. Iinkcukacha ezongezelelweyo malunga namafutha kunye nama-creams siza kuthetha ngezansi, sinika imizekelo ethile kunye namagama, kodwa apha siza kukuxelela iingongoma eziqhelekileyo, ngenxa yokuba uya kukhetha ukhetho olungcono kunyango.
Yintoni ebandakanywe kwilungiselelo?
Icandelo eliphambili kuzo zonke iindlela zokunyanga iifowusi yi-acid ese-salicylic. Ngenxa yempembelelo yayo kwindawo ewonakalisiweyo, i-honeycomb iyancwitshwa kwaye emva kweentsuku ezimbalwa zisuswe ngepumice. Ungasebenzisa iindlela kunye neendlela eziqhelekileyo, ezikusetyenziswa kweli phepha:
Amanzi okuhlamba ngeesepha kunye nesoda. Zithathwa kwisigamu seyure, emva koko ulusu lukhutshwe kunye nekhemisi ephuculisayo;
ukuhlamba kunye ne-potassium permanganate kunye netyuwa-kunceda ngeentlungu, kunciphisa kakhulu;
Gquba amazambane ezigayiweyo ngejeyi kwaye ubophe emlenzeni ukuze uthinte ingqolowa.
Kucetyiswa ukuba wenze lolo suku ubusuku.
I-ointment evela kwimizi kunye neefowusi. Imizekelo yezixhobo ezilungileyo
Akusoloko kulungele ukutyelela kwiindlela zonyango zonyango kwaye, ukuthetha ngokunyanisekileyo, akusebenzi ngendlela esebenzayo njengoko usebenzisa i-ointments ekhethekileyo kwaye ngaphandle kokungekho mfuneko "imidaniso eneengoma zamathamborini" ukuba ulahlekise i-naryttes ecasulayo.
Nazi ezinye ioli ecocekileyo:
Ioli yama-salicylic enye yeyona ndlela ishibhile kwaye inamandla kakhulu. Igama lafunyanwa ngenxa yobuninzi bequmrhu le-asidi salicylic, ukubulala ama-microbes, ukumisa isikhumba esonakele nokukhupha. Ixabiso liphakathi kwe-$ 1;
I-Antimozolin "okanye i-Super Antimozolin" imveliso ebiza kakhulu, ngenxa yokuba ngaphandle kwe-acid ye-salicylic iqulethe i-composition esebenzayo yokuphucula nokunciphisa izinto. Ukusebenza kakuhle kusemgangathweni, kodwa ixabiso lingaphakathi kwe-$ 2;
"I-Bensalitin" kunye nokulungiselela i-antimosol "iintsuku ezi-5" - zinesakhiwo esifanayo sezinto, njenge "Antimozolin", umgaqo ofanayo wokusebenza. Bobabini bemi malunga ne-1.5.
Zonke ezo mafutha - uncedo olukhulu ekuxazululeni iingxaki, zithatyathwa kakuhle ngabantu. Ngoko ke, ukuba kukho ikhemisi esondeleyo-hambani uze ufumane ukuba iimveliso ezinjalo ziyafumaneka kubo. Ukuba akunjalo-cela nayiphi na ikhambi, apho ulolu hlobo luqukethe i-salicylic acid.
Iikremu kunye neebhalms ukusuka kwiifowuni kunye nengqolowa
Ukongeza kwonyango oluchanekileyo lweefowuni ezomileyo kunye neengqolowa, ungakulibala ukuphathwa kwesikhumba kwiindawo ezinobungozi kunye nama-balsams kunye nama-creams. Naliphi na i-arhente yansuku zonke eneoli. Eyona ndlela, ukuba kukho i-extract yobisi kunye ne-thiourea-inesiphumo esihle sokulwa nokuvuvukala, unciphisa ulusu kwaye ukhuthaze ukuphulukiswa ngokukhawuleza. Ukongezelela, kucetyiswa ukuba usebenzise ioli ye-fir, eyenza isithintelo ngokubhekiselele kubhaktheriya nakweminye i-microorganisms kwaye ukhusele ulusu kwiinyawo ukusuka kwi-stimuli, ebangela iingxaki.
Unakekele iinyawo zakho, ugqoke izicathulo ezipholileyo, iisokisi ukuya kubukhulu, okanye usebenzise iibhola kunye neendlela zokuthintela. Emva koko unyango lwabafowuni obumile kunye nesitshixo kunye nezinye iintlobo zeengqolowa zinokuphepheka kalula.
Umntwana okhulayo. Indlela yokuphepha iingxaki kwimfundo
Inkqubo yobusi bendabuko
U-Alexander Kerzhakov usolwa ngokubetha umkakhe uMilana
Inendima yezitho zengqondo ebomini bomntu